Qarax Gaari booyad ah looga gubay Maleeshiyaadka Bangaraafta oo ka dhacay Duleedka Ballidoogle.
Mareykanka oo walaac ka muujinaya burbur ku yimaada xukuumadda Addis Ababa.
Caa'isha Romano: Asbabahan ayaan u qaatay diinta Islaamka.
Qarax Khasaara dhaliyay oo ka dhacay xaafadda Taleex ee degmada Hodon.
Ciidamo daacad u ahaa Farmaajo oo Dhuusamareeb laga saaray iyo diyaarado gaadiid dajiyay.
Madaxweynaha Baraaziil oo la xanuunsan cudurka Carona Virus.
Sunday June 09, 2019 - 15:14:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
(Rating 2.0/5 Stars) Total Votes: 1
Wararka ka imaanaya Sh/Hoose ayaa sheegaya in qarax khasaara badan dhaliyay oo ka dhacay duleedka degmada Wanllaweyn oo ay ku xoogganyihiin maleeshiyaadka lagu tababaray garoonka diyaaradaha Balidoogle.
Ugu yaraan gaari booyad ah nuuca shidaalka xambaara ah ayaa lagu gubay qaraxa oo ay wateen maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan ee Mareykanku tababaray.
Wararka ka imaanaya Sh/Hoose ayaa sheegaya in qaraxyo is xigxiga ay haleeleen kolonyo gaadiid ah oo ka yimid dhanka garoonka diyaaradaha Baligdoogle oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ka joogaan Soomaaliya.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lala beegsaday kolonyada lagu burburiyay gaari booyad ah balse aan tirakoob rasmi ah laga heyn khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee gaaray maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan.
Goob joogayaal ayaa sheegay in goobta qaraxyadu ka dhaceen ay soo gaareen ciidamo farabadan kuwaas oo daabulay meydadkii iyo dhaawacyadii gaaray ciidamadii laweeraray, ma ahan markii ugu horraysay oo ciidamada huwanta ah qaraxyo lagula beegsado wadada laamiga ah ee xiriirisa degmooyinka Wanllaweyn iyo Afgooye.
4 katirsan ciidamada AMISOM oo ku dhintay weerar ka dhacay deegaan katirsan Sh/hoose.
Al Shabaab oo sheegtay Mas'uuliyadda Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo Baydhabo.
Jihaadiyiin Weerar cusub ku qaaday saldhig kuyaal duleedka Gaarisa.
Gaari gaashaaman oo ciidanka AMISOM looga gubay degmada Huriwaa iyo Itoobiyaan laweeraray.
deg deg: Qarax xooggan oo ka dhacay nawaaxiga dekadda Muqdisho.